Q हस्तमैथुनको कुनै पनि साईड ईफेक्टहरु रहेको हुन्छ ?
Q मेरो १ वर्षको बच्चालाई हरेक २ घण्टामा हरियो दिसा भइरहेको छ । मलाई डर लागेको छ, वास्तवमा मैले के गर्नुपर्छ ?
तपाईंको बच्चालाई आन्द्रा सुन्निने भएकोले पखाला भएको हुन सक्छ । यो दाँत पलाउने चरणमा केही सामान्य नै हो । जलविहिन वा डिहाइड्रेशनले विशेषगरी शिशुमा धेरै जटिलताहरू ल्याउन सक्छ । त्यसैले तपाईंले उनीहरूलाई सबै प्रकारका औषधि पसलहरुमा उपलब्ध हुने ओ.आर.एस. समाधानको रुपमा पाइने तरल पदार्थ दिइ नै रहेको सुनिश्चित गर्नुहोस् । बच्चालाई हरियो दिसा भई नै रह्यो भने, जतिसक्दो चाँडै चिकित्सक भएको ठाउँमा जानु ठीक हुनेछ ।
Q नमस्ते, मेरो श्रीमानले अघिल्लो मंगलवार पाईल्सको शल्यक्रिया गर्नुभयो र त्यहाँको अस्पतालमा थप २ दिन बस्नु भएको थियो । उहाँको हिजो (बिहीबार) डिस्चार्ज भयो । तर उहाँलाई दिसा निस्कँदा ठूलो समस्या भईरहेको छ । उहाँ बाथरुममा जादाँ लगभग बेहोस नै होला जस्तो हुनुहुन्छ र धेरै कमजोर बन्नुहुन्छ । उहाँ क्रीम लगाउदैँ र ट्याब्लेटहरू पनि हालेर तातो पानीले सिज स्नान गर्नुहुन्छ । तर अझैं समस्या भईरहेको छ । कृपया दिसा गरेको बेलामा दुखाई कसरी कम गर्ने भनेर मद्दत गर्नुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् ।
उहाँलाई ३- ४ दिनसम्म दुख्ने र कठिनाई हुनेछ । तपाईं उहाँलाई थप तरल आहार र पानी दिनु पर्ने हुन्छ जसले तपाईंलाई दिसा बनाउन र दुखाईबाट मुक्त हुन सजिलो बनाँदछ । उहाँलाई अड्किने समस्याबाट बचाउनको लागि थप फाइबरयुक्त खानेकुरा दिनुहोस् । दिइएको औषधि नियमित रूपमा लिनुहोस् । उहाँलाई खानेकुरा उपयुक्त रुपमा पचाउनको लागि हरेक दिन एक गिलास नौनी सहितको दूध र सानो कचौरा दही दिनुहोस् । उहाँलाई ठीक भएपछि नियमित रुपमा दिनहुँ ३० मिनेटको लागि केहि व्यायामहरु जस्तै हिड्ने, साईकल चलाउने वा पौडी खेल्ने आदि गराउन दिनुहोस् । रक्सी र धुम्रपानबाट बचाउनुहोस् । यदि समस्या लामो समयसम्म रहिरहेमा, शल्यचिकित्सकसँग परामर्श लिनुहोस् ।